Maitiro ekuchenesa Teregiramu pane yako iPhone zviri nyore | IPhone nhau
Seimwe nzira yeWhatsApp takave neTeregiramu kwenguva yakareba. Ichi chishandiso chagara chiri nhanho kumberi mune mazhinji maficha ayo yaanopa achienzaniswa nemakwikwi, zvisinei, zvinoita sekunge zvisingaite kurwira neWhatsApp nekuda kwenzvimbo hombe yevashandisi iyo yainayo uye avo vanonyanya kushandiswa kune yayo interface. Nekudaro, Teregiramu haimire kukura muvashandisi uye kugona, nekudaro iri kuramba ichiiswa pane mamwe madhijitari uye neizvi kunouya kudiwa kwekuchengetedza. Kusiyana neWhatsApp, iyo Teregiramu yekushandisa inobvumidza iwe kuti utumire uye ugamuchire huwandu hwemafaira echero saizi, pamwe nezvinamirwa, mimhanzi uye zvimwe zvakawanda. Kune zvese izvi isu tinoda kukudzidzisa maitiro ekugadzirisa uye kuchenesa Teregiramu pane yako iPhone nePadad kuti ugone kuwana zvakanyanyisa kubva mundangariro yemuchina wako, zviwane pamwe nesu.
Chinhu chekutanga kukuyeuchidza izvozvo pamusoro peichi chinyorwa tine vhidhiyokana izvo zvinokubatsira iwe kuona kuita matanho ese atichazotaurira muchinyorwa chino, kana iwe ukasarudza kubatsira iyo Actualidad nharaunda ye iPhone kukura. Pasina imwezve ado, ngatiendei ikoko nemanomano ekuchengeta Teregiramu yakachena pane yako iPhone.
1 Tricks yekuchengetedza shoma "marara" inogoneka
1.1 Bvisa otomatiki faira kurodha pasi
1.2 Ganhurira kuti mafaera akareba sei
1.3 Mamwe marongero ekufunga
2 Maitiro ekuchenesa Teregiramu uye nekuvandudza mashandiro
2.1 Maitiro ekujekesa iyo Teregiramu cache pane iyo iPhone
2.2 Maitiro ekudzimisa zvemukati zvemukati
2.3 Maitiro ekudzima wega Teregiramu mafaira
Tricks yekuchengetedza shoma "marara" inogoneka
Iyo inonatsa zvakanyanya haisi iyo inonyanya kufarira, asi iyo inosvibisa zvishoma. Sezvazvakaitika kare mune yedu posvo nezve kuchenesa WhatsApp, zvakanyanya kukosha kuti isu tigadzirise kumisikidza pane yedu iPhone iyo titendere isu kuchengetedza iwo mashoma mashoma emafaira asina basa pane yedu kifaa, ngatitarisei kune ese marongero anoiswa neTeregiramu paminwe yedu.
Bvisa otomatiki faira kurodha pasi
Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita kudzima otomatiki faira kurodha pasi. Zvichida muTeregiramu iwe wakabatanidzwa kune dzakasiyana nharaunda kana mapoka makuru uko zvisingaite kutevera tambo munguva chaiyo yezvose zvakagovaniswa, ndoda kupinda kumarudzi ese emavhidhiyo, mifananidzo kana zvemukati mune zvemimhanzi uye mafirimu izvo zvinosvika kune yedu iPhone, saka, zvakakosha kuti isu tinodzora otomatiki kurodha pasi.
Kugadzira otomatiki kurodha pasi:
Sarudza Zvirongwa mukati mekushandisa kweTeregiramu
Sarudza sarudzo Dhata uye kuchengetedza
Mukati iwe uchawana chikamu Multimedia yekuzvitsvaga, uye iwe uchave unokwanisa kusarudza pakati pesarudzo dzakasiyana, rairo yangu ndeyekuti uvaremedze vese.
Ganhurira kuti mafaera akareba sei
Ngazvive sezvazvingaite, kunyangwe zvika dhawunirodwa otomatiki kana kana tikazvidhonza pamawoko, nekutadza mafaira aya anochengeterwa muteregiramu gore kana mune cache yechigadzirwa chedu, asi kwete hazvo mune yedu gallery. Saka, tinogona kuronga Teregiramu kudzikamisa iyo nguva yezvinyorwa zvirimo pane yedu iPhone, inova pfungwa inotonhorera chose.
Kuronga otomatiki faira kubviswa:
Mukati meTeregiramu pinda chikamu che Zvirongwa
Sarudza chikamu Dhata uye kuchengetedza
Kana wangopinda mukati enda ku Kuchengetedza kushandiswa
Chikamu chekutanga ndeche Chengetedza multimedia, uye tinogona kusarudza kuti tinoda kuti ichengetwe kwenguva yakareba sei, zvakare bvisa cache zvakananga.
Mamwe marongero ekufunga
Izvo zvakakosha kuti iwe uzive kuti iyo rotomatiki kutamba kweGIFs Unofanirwa kurodhaunira kuti ugone kumhanyisa, saka zvinokurudzirwa kuti isu tiremedzewo kuita uku mukati mechikamu che Dhata uye kuchengetedza. Chinhu chimwe chete ichi chinoitika ne otomatiki vhidhiyo yekutamba, kuti isu tinogona kudzima pakufara kwedu kana tichida.
Aya ndiwo matipi makuru ekuchengeta Teregiramu yakachena sezvinobvira, zvakadaro Pazasi iwe une zvimwe zvinogoneka zvinhu zvaunogona kuchinjisa kune kwako kufarira.
Maitiro ekuchenesa Teregiramu uye nekuvandudza mashandiro
Kana tangojekesa hunyengeri hwekumisikidza Teregiramu "nemazvo" uye nekudaro tichidzivirira zvakanyanya sezvingabvira kuti huwandu hukuru hwemarara hunochengeterwa pachigadzirwa chedu, tinoenderera mberi nekuchenesa zvakakwana. Kana iwe usati wakateedzera kumisikidzwa kwatakakurudzira, unogona kunge uine basa rakaomarara pamberi pako, zvisinei, Teregiramu ine inonakidza kwazvo faira manejimendi chishandiso chakagadzirira izvo zvichatibatsira kuti tiite basa iri.
Maitiro ekujekesa iyo Teregiramu cache pane iyo iPhone
Mazhinji maapplication haatenderi, asi kujekesa cache chinhu chakakodzera mashandiro ekuvandudza mashandiro echigadzirwa, kunyanya izvo zvine shoma shoma yekuchengetedza, zvisinei, kujekesa cache kuri nyore:
Pazasi iwe unowana iro basa Bvisa Teregiramu cache iko kungodzvanya mavara ebhuruu kunokutendera kuti uite basa racho
Maitiro ekudzimisa zvemukati zvemukati
Chishandiso chinokurumidza kuita bvisa zvakananga zvese zvirimo zvega zvega zveTeregiramu chat chatiri kuda. Ichi chishandiso cheTeregiramu chinotibvumidza kudzima matatu akasiyana mafaera: Mifananidzo, Mavhidhiyo uye «Mafaira». Zviri nyore kwazvo:
Pazasi pega chega terevhizheni chat yatinayo isu pachedu, kana tikabaya pazviri, iyo faira inosarudza ichaonekwa yatinogona kudzima
Iyi pasina kupokana ndiyo inokurumidza nzira. Kunyange zvakadaro, isu tinofanirwa kuziva kuti hazvizosarure zvirimo uye zvichazvidzima pasina kumwezve, kana tichida kuchengeta chero pikicha kana vhidhiyo yakachengetedzwa.
Maitiro ekudzima wega Teregiramu mafaira
Iyi ndiyo nzira inonetesa, asi ichatibvumidza kusevha zvatinoda kana kudzima zvirimo. Hatina chishandiso chekusarudza, saka isu tichafanirwa kuvasarudzira chimwe nechimwe.
Isu tinovhura nhare yeTeregiramu
Dzvanya pachikamu chepamusoro chezita reboka kana wekubata
Tichava nematepi e: Avhareji; Zvinyorwa; Zvinongedzo
Isu tinosarudza chero faira uye tinovhura mamiriro ezvinyorwa
Tinogona kusarudza kana tichida «Sevha kuReel» uchishandisa bhatani rekugovana, kana kana kune rimwe divi isu tichida kuidzima nekudzvanya marara emarara pazasi kurudyi. Zvakare usakanganwa kuti iwe unogona kujoina nharaunda yedu yeTeregiramu ku IYI BHUKU.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuchenesa Teregiramu pane yako iPhone zviri nyore
Ndatenda, pekutanga ndanga ndichipenga kutsvaga nzira yekuchenesa teregiramu
Apple TV + ichatanga kuratidzira yakasarudzika episode ye "Mythic Quest: Raven's Banquet"